China Taper Roller Bearing 30200 Series orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Yi Xinyan
Tapered roller beared misy ny peratra anatiny, roller, retainer ary peratra ivelany, izay azo apetraka misaraka. Ity karazana fitondra ity dia afaka manohana ny enta-mavesatra mavesatra sy ny famaky axial. Noho ny fitondra mihodina dia tsy afaka mamindra ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalana tokana, mila mametraka fantsom-baravarankely vita amin'ny tapered isika handefasana ny enta-mavesatra mitondra ny lozisialy. Ity karazan-jaza ity dia misy laharan-jiro tokana, laharana roa ary enina milanja tapered efatra arakaraka ny isan'ny tsanganana. Ny fanadiovana ny zana-kazo manidina misy tapered dia mila fanitsiana mandritra ny fametrahana. Ary ny fahazoan-dàlana mitondra ny rojom-baravarankely misy laharana roa sy efa-joro dia namboarina araka ny fangatahan'ny mpampiasa ary tsy mila manitsy.
Taper roller bearings dia matetika ampiasaina hanohanana ny enta-mavesatra mitambatra indrindra izay misy ny enta-mavesatra. Azo misaraka ny kaopan'izy ireo mba hivory mora. Mandritra ny fampiakarana andd amin'ny alàlan'ny fampiasana, ny radial clearance sy ny axial clearance dia azo ahitsy ary azo atao ny mametraka preload.
Tapered roller bearings dia be mpampiasa amin'ny fiara, fikosoham-bary, fitrandrahana, metallurgy, milina plastika ary indostria hafa.
Modely azontsika atolotra: Metric: 30200, 30300, 31300, 31000, 32200, 32300, 33000, 33200 andiany. / Inch: andiany JL, JLMS, LS, LM, LMS, MS, HMS.
Taper roller mitondra andiany hafa ho an'ny referansa tsaratsara kokoa ho anao:
1. Firy ny MOQ an'ny orinasanao?
Ny orinasanay MOQ dia 1pcs.
2.Mety hanaiky OEM ve ianao ary hamboarina?
ENY, ekena ny OEM ary azonay atao manokana ho anao araka ny santionany na ny sary.
3.Ahoana ny zoro?
Amin'ny stock, ny sasany fotsy, ary ny sasany mainty.
Saingy afaka manodina ny zorony fotsy ho mainty isika, ary mainty ho fotsy koa.
4.Manana tahiry ve ianao?
ENY, manana ny ankamaroan'ny bearings isika amin'ny stock, indrindra ny bearings lehibe.
5.Ny bearings lehibe ihany ve no anananao?
Manana bearings lehibe, salantsalany ary madinidinika isika, saingy ny fiakarana lehibe no tombony
Previous: UC Series
Manaraka: Deep Groove Ball Bearings 6200 Series